IFama yokuChittering (RNN6)
Stretham, Ely, England, United Kingdom
Ukunika lonke ubutofotofo ngeholide eyonwabisayo IFama yeChittering inefenitshala ngokukhululeka kwaye yenza ukhetho olubalaseleyo kwiintsapho. Umgangatho ophantsi:
Igumbi lokuhlala: Ngesitshisi seenkuni, i-Sky TV (iphakheji epheleleyo), isidlali seDVD, izithethi ze-bluetooth stereo, umgangatho we-oki kunye neengcango zaseFransi ezikhokelela egadini.
Igumbi lokuhlala: Nge-Sky TV (iphakheji epheleleyo) kunye nomgangatho weplanga.
Ikhitshi / igumbi lokutyela: Ngombane / uluhlu lwegesi, ifriji / ifriji yesimbo saseMelika, umatshini wokuhlamba izitya, imiqadi kunye nomgangatho ofakwe iithayile.
Igumbi loncedo: Nomatshini wokuvasa, isixhobo sokomisa, imicrowave kunye nendlu yangasese.
Igumbi lokulala eli-1: Ineziphu kunye nekhonkco lebhedi enkulu (inokuba yi-2ft 6in iibhedi ezingamawele xa uceliwe) kunye ne-en-suite ene-shower cubicle kunye nendlu yangasese.
Igumbi lokulala 2: Inebhedi enkulu kunye ne-en-suite eneshawari ngaphezulu kwebhafu, kunye nendlu yangasese.
Igumbi lokulala 3: Ngebhedi enkulu, ibhedi eyodwa (yamalungiselelo okulala aguqukayo) kunye nomgangatho weplanga.
Igumbi lokulala lesi-4: Nebhedi enkulu, umgangatho weplanga kunye ne-en-suite eneetyhubhile zeshawa kunye nendlu yangasese.
Igumbi lokulala 5: Ngebhedi enkulu kunye nomgangatho wamaplanga.
Igumbi lokulala 6: Ngebhedi ephindwe kabini.
Igumbi lokuhlambela 1: Ngebhafu, i-cubicle yeshawa kunye nendlu yangasese.
Igumbi lokuhlambela 2: Ngebhafu kunye nendlu yangasese .. I-oyile yokufudumeza i-oil central, i-calor gas, umbane, i-bed linen, iitawuli, i-Wi-Fi kunye nezigodo zokutshisa iinkuni zibandakanyiwe. Ibhedi yokuhamba kunye nezinyuko ziyafumaneka xa uceliwe. 2 izitulo eziphezulu. Wamkelekile ipakethe. Ulwakhiwo olunentenetya yetafile kunye netafile yepool. Igadi eyi-acre ene-patio, ifenitshala yegadi, igasi yerhasi, ibhola ekhatywayo kunye nenethi yentenetya. Ivenkile yebhayisekile. Indawo yokupaka yabucala yeemoto ezisi-8. Akutshaywa. . IFama yaseChittering ihlala kwindawo yabucala yeefama ezilinywa ngabanini kwaye ifikeleleka ngendlela yabucala, kwaye ibekwe ngokulula phakathi kweCambridge kunye ne-Ely. Le ndlu yakhiwa ngokutsha ukusuka kwisisele esidala kwaye inika yonke intuthuzelo ngendawo eyonwabisayo neyokuphumla. Ijikelezwe ngamaphandle avulekileyo lo mhlaba lolona khetho lubalaseleyo lokudityaniswa kosapho olukhulu okanye iindibano zobuhlobo ezifuna indawo enkulu yokuhlala. Sisiseko esifanelekileyo sokuhlola iCambridgeshire, iSuffolk kunye neNorfolk. Kukho iindlela zokujikeleza eziya eCambridge nase-Ely ezifikeleleka ngokulula kwifama. Ezinye iindwendwe zinokukhetha ukuphumla kwigadi yabucala eyi-acre ene-4-acre paddocks kwaye zonwabele izixhobo ezikwisiza okanye kufutshane. Undwendwe luya kufumana ipaki ye-aqua kunye ne-wakeboarding ebekwe kwifama kwaye inokubhukishwa ngokusebenzisa umnini (ngexabiso). Kukwakho nenethi yentenetya kunye nenqaku elikhulu lebhola ekhatywayo egadini, ngelixa igumbi lemidlalo libonelela ngetafile yentenetya kunye netafile yepool. Ilali yase-Ely Leisure iimayile ezi-5½ inamadama okuqubha, icinema enescreen ezininzi, iklabhu yezempilo, iindawo zokutyela kunye noluhlu lokuqhuba olunebala legalufa eli-9, kwaye ukuloba kuyafumaneka ekuhlaleni. Ukuhlala apha kuya kunika ithuba lokunandipha indawo yasemaphandleni yefama, kunye nokuhamba kwefama kunye nomlambo, ukubukela iintaka kunye nokuhamba ngebhayisikile. Ibekwe kumda wefama yi-Stretham Old Engine, eyakhiwa ngo-1831, umzekelo wenjini yokuhambisa amanzi emhlabeni.
Isixeko saseCambridge sikumgama oziikhilomitha ezili-10, sidume ngeekholeji zaso, iimyuziyam, ukhenketho kunye nezitiya zebhotani, apho iindwendwe zinokuzama isandla sazo ngokubetha kuMlambo iCam okanye zonwabele ubutyebi beevenkile, iikhefi kunye neeresityu. Isixeko sase-Ely esineemarike kunye nokuthenga kwalapha ekhaya kumgama oziikhilomitha ezi-6 kwelinye icala, sithe thaa kwimbali kunye nekhathedrali yamandulo enomtsalane kunye nomphambili womlambo omde apho unokonwabela uhambo lwesikhephe okanye uhambo olusecaleni komlambo. Ukuba unqwenela uhambo oluya elunxwemeni kunxweme oluseMantla eNorfolk lungaphantsi kweekhilomitha ezingama-50, iRoyal Sandringham Estate ingaphantsi kweekhilomitha ezingama-40, kunye nehlathi laseThetford, elidume ngokuhamba kunye neendlela zokuhamba ngeebhayisekile kumgama oziikhilomitha ezingama-35 kuphela. Iipropathi zeNational Trust zinokufunyanwa kufutshane eWicken Fen, iimayile ezi-5, kunye ne-Anglesey Abbey kunye nezitiya eziyi-13 yeemayile. I-Newmarket nayo i-13 yeekhilomitha kunye nobusuku bomculo kunye neentsuku zomdyarho, kunye neMyuziyam ye-Imperial War e-Duxford yi-24 miles. Ke kukho indawo eninzi yokujonga ukuba ufuna ukujonga indawo ngexesha lokuhlala kwakho. Kukho i-pub engaphakathi kweemayile ezi-1 kunye nokufikelela kwifama kunye nevenkile kwilali yaseStretham yeekhilomitha ezi-2.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-1 096 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stretham, Ely